Sezimpahla zokubhukuda kancane kancane unqoba ezivulekile ezisemadolobheni. Ukutholakala okungalindelekile kuleli hlobo - isikhwama Ababazi bakha. Abaklami baye zinakekelwe ukuthi le-accessory bheka emangalisayo stylish and efanelekayo hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa ebhishi, kodwa nezalo shicilelo.
Wicker nezikhwama izintokazi ehlotshisiwe, izikhwama abayitoho futhi evulekile namapotimende, ngisho kusihlwa amvikele. isixazululo Color Decor engavamile kungenzeka abanesibindi kakhulu. Futhi uma unquma ukuthenga Ababazi bakha esikhwameni, isithombe kungenziwa kulekelelwa futhi cute pair of Ababazi bakha izicathulo. I lamavulandlela kulo mkhakha baye abe fashion ehlobo Dolce & Gabbana. Ngokuthakazelisayo, isikhwama Ababazi bakha ubonakele eSicily - emzini abaklami abadumile.
Okwenza Ababazi bakha izesekeli?
Ukwakha izesekeli nemfashini esetshenziswa ngezinto zemvelo - utshani - Imicu yotshani emibalabala futhi zokwenziwa. Abanye abaklami basebenzisa lesikhumba Jute. A inqubo beluka Yisimanga: izingxenye ezinkulu okufakwe abobunjwa encane weJiyomethri kulekelelwa eluke amagoda ezincane.
isikhwama Wicker muhle ngokukhethekile nge izingubo ezilula: ukukhanya omunye umbala ingubo, maxi ingubo noma stylish isigqoko esimhlophe nebhantshi imfashini udale indlela obunobunye. Njengoba for izicathulo, kuzoba khona ephelele umphelelisi izimbadada noma izimbadada ngaphandle isithende nge aluka ukuwuthukulula. Khumbula, izikhwama nokwelukiweyo namuhla at esiqongweni ukuthandwa, ngakho intokazi kufanele uthole le nto ehlobo.
Ifomu ethandwa kakhulu izikhwama - trapezium, kodwa akukho isikhwama ngaphansi ophuthumayo nokwelukiweyo ukuma unxande. Intombazane abayoba ezandleni isikhwama Ababazi bakha kwesitsha, ngokuqinisekile sidonse nhla lengubo abavelayo - ngoba ezifana ngendlela stylish ziyoxazululwa kuphela lady beqiniseka kakhulu. Phawula imodeli ezithakazelisayo isikhwama kulekelelwa aluka eyinkimbinkimbi. Izikhwama nojosaka, ehlotshiswe kwamagoda utshani, - lo mkhuba isizini. Wicker izikhwama athandwa entsheni. Ngisho noma imfanelo sithombe voluminous kakhulu, umnikazi walo uyobheka isifazane kakhulu. Isisebenzi onekhono ungadala wakho design wobuciko: flip ngokusebenzisa omagazini ku ngenalithi, ngokuqinisekile uthola kukho okuhle, ikakhulukazi kusukela ekwenzeni isikhwama ngezandla zakho akunzima.
Indlela yokwenza esikhwameni Ababazi bakha ngokwakho?
Ukuze uqale, kudingeka Thenga kakhulu umucwana eqoqwe ekuqaleni kuka-August. Esomile reassemble usayizi eluhlaza. Uma usebenzisa utshani ngonyaka odlule, nilishiye libe yingxenye eyodwa kwezine zawo ihora emanzini, ukuze lube nokunwebeka ngaphezulu. Indlela lelula ukwelukwa - usebenzisa kwamagoda. Three utshani uvalwe ukusonta kulayini. Lapho isiqu uphela ukuba sifake olandelayo, futhi ngakho-ke Qhubeka spin othize embuthanweni, eguqa ezindongeni. Ngemva kokuphela isikhwama bakhande off ngesando, bamba ithambo futhi ukunamathisela izesekeli ezengeziwe (knob) netakhiwo umhlobiso. Isikhwama siphelile kungabonakala kalula ababethi noma yimuphi umbala - futhi insiza yakho elikhanyayo ehlobo ulungile!
Izikhumulo zezindiza eKemerovo. Yini esiyaziyo ngala madoda?
Futha Macho Man - isihluthulelo nobuhlobo phakathi abashadayo ezimbili